Yega Yekunamatira geomembranes
Peturu gasi zvirongwa
Tunnel uye mapurojekiti emugwagwa
Kuvaka & Roofing
Dhamu & Lake mapurojekiti
Cheng Du Grain Group Co., Ltd yekuchengetera mvura yekudzivirira mvura.
Kuchengetedzwa kwechikafu ndiyo hwaro hwekuvandudza hupfumi. Zviyo zvekuchengetera zvine zvakakwirisa zvinodikanwa pane iyo hunyoro-chiratidzo uye leakage-chiratidzo cheayo imba yekuchengetera. Tsika dzeSBS asphalt coils dzine njodzi huru dzemoto panguva yekuvaka. Zvekuvakwa kwe ...
Mvura Isina Mvura Inotengesa yeCheng Du 2021 FISU World University Mitambo
Iyo 31st Universiade ichaitwa muna Nyamavhuvhu 18, 2021 muChengdu, guta rekumusha repandas. Trump Eco Technology Co, Ltd. ikambani yemuno muChengdu. Yakadzika midzi muindasitiri isina mvura kweanopfuura makore makumi matatu nemashanu. Nehunhu hwayo hwakanakisa uye basa rakanakisa, rakakunda kuzivikanwa uye kuvimba kwe ...
Yakakwira-density polyethylene musika sikero inokura panopera 2026
Musika wepasi rose weHPPE wakakosheswa pamadhora US $ 63.5 bhiriyoni mu2017 uye unotarisirwa kusvika US $ 87.5 bhiriyoni na2026, iine huwandu hwegore hwekukura hweanosvika 4.32% panguva yekufungidzira. Yakakwira-density polyethylene (HDPE) inonzi thermoplastic polymer inogadzirwa kubva monomer ethylene yakagadzirwa kubva nat ...
Yakakwira-density polyethylene (HDPE) geomembrane musika tarisiro, zvinhu zvekuvandudza, mikana yazvino uye fungidziro 2027 | GSE Kubata, AGRU, Solmax, JUTA
Los Angeles, USA: Iyo Global High Density Polyethylene (HDPE) Geomembrane Market Report inopa huchenjeri hwakajeka hunoita kuti vatori vechikamu vemusika vakwikwidze zvakanaka nevanokwikwidza vakaomarara zvichienderana nekukura, kutengesa uye zvimwe zvakakosha zvinhu. Kuwedzera kune kiyi musika masimba (kusanganisira ...
Na2026, iyo geosynthetic zvinhu musika inosvika US $ 45.25 bhiriyoni; kushandiswa kukuru kwezvivakwa zvekusimudzira kusimudzira kukura: Fortune Business Insight ™
Kubvumbi 2, 2020, Pune (GLOBE NEWSWIRE) -Chikero cheiyo yepasi rose geosynthetic zvinhu musika ichagashirwa kutariswa nekuda kwekuwedzera kwekushandisa kwezvinhu zvinogoneka zvekuvaka. Sisitimu yepasi inoderedza kushandiswa kwezvinhu zvakasikwa (senge zvakaunganidzwa uye jecha), nokudaro zvichirerutsa kuvaka activi ...
Iko kushandiswa kweDaelim HDPE Geomembrane kunogona kukonzera kuchera kunowedzera. Maitiro matsva anosanganisira iyo murwi leach nzira yekukosha simbi kuburitsa uchishandisa makemikari mhinduro zvakakonzera yakaderera mutengo kuburitsa kubva yakaderera giredhi ores. Iko kushandiswa kweanoshanduka Daelim Geomembrane liners inodzivirira iyo contam ...
Mapurazi etangi akasungirirwa kudzivirira kusvibiswa kwemvura yepasi kana paitika kukanganiswa kwemakemikari. Iyo yechipiri midziyo yekugadzika inogona kuiswa pakongiri kana zvakananga pasi. Aya ma liner masisitimu echipiri midziyo anogona kuve akaomesesa kushandisa akajekesa akasungirirwa kune tangi uye ot ...
HDPE Geomembranes anoshandiswa mumakomba ekurasa marara kudzivirira kuyerera kwemvura mumarara, nokudaro ichideredza kana kubvisa kugadzirwa kwemarara emvura mushure mekuzadza tsvina. Iyo kapu yakagadzirirwawo kuteya nekunyatsoburitsa magasi anogadzirwa panguva yekuora kwetsvina. Chimwe chiziviso ...
Chinangwa chekutanga cheiyo HDPE Geomembrane liner mune yekumhara ndeye kuchengetedza mvura yepasi kubva mukusvibiswa. Daelim HDPE Geomembranes inopesana nemarara mazhinji uye inodarika zvinodiwa nekusakwana. Njodzi marara marara evhu anoda mairi-liners uye leachate kuunganidzwa / kubvisa ...
Kubva kuma1950, mainjiniya vakabudirira kugadzirwa nemageomembranes. Iko kushandiswa kwema geomembranes, ayo anonziwo anoshanduka seanomarara liners (FMLs), akawedzera semhedzisiro yekukura kunetsekana pamusoro pekusvibiswa kwenzvimbo dzakakosha dzemvura. Chinyakare porous liners, senge kongiri, admi ...
Trump Eco Technology Co, Ltd. ikambani hombe iri kuita basa rekutsvaga, kugadzira uye kutengesa kwe geosynthetics uye macromolecule zvinhu zvisina mvura.
Kero: Kwete 32, kuburitsa chivakwa chehofisi, Jinke Road, Jinniu Dunhu, Chengdu, China 610036